Muxu salka ku haya muranka madax ka noqoshada isbahaysiga Xisbiyada | SMC
Home WARARKA MAANTA Muxu salka ku haya muranka madax ka noqoshada isbahaysiga Xisbiyada
Muxu salka ku haya muranka madax ka noqoshada isbahaysiga Xisbiyada
Waxaa asbuucyadii la soo dhaafay ka socday magalaada Muqdishu doodo iyo muran ka dhashay cidii hogaamin lahayd isbahaysi ay ku midoobeen xisbiyo ka mida xisbiyada mucaaradka dowlada. Dad badan ayaa is weydiidayay sababta keentay in ay waqti dheer qaadato in mucaaradka isku tanaasuli waayaan?, gaar ahaan kuwa ku midoobay isbahaysiga xisbiyada gaar ah? Waxaa kaloo la isweydiinayaa ilaa xadkee ayaa mucaardku isku tagay midaysnaan doonaa?.
Qaar ka mida mucaaradka isku tagay ayaa waxa ay in mudo ah dhaqaale ka raadinayeen wadmo shisheeye si ay u dardar galiyaan dagaalka ka dhanka ah dowlada Fedaraalka, laakiin wadamadaas ayaa ka biyo diiday in ay dhaqaale ku bixyaan mucaarad kala daadsan oo aan lahayn hogaan midaysan iyo madax/ shaqsiyaad kaligeed socda oo aan lahaynin awood siyaasadeed oo ka danbeysa. Si hadaba dhaqaalahaas loo helo isla markaana loo mideeyo mucaaradka ayaa waxaa in mudo ah lagu muransaa cida hogaamin doonta mucaaradkaas.
Su’aalaha dad badan isweydiinayaan ayaa ah , yaa la siinayaa dhaqaalaha la rajaynayo ? ma isbahaysiga oo dhan ayaa la siinayaa, waaba hadii la helo dhaqaalahaas? ma waxa uu noqon doonaa mid kawada dhaxeeyn doono mucaaradka? Mise cida loo magacaabay isbahaysiga ayaa ku qaraab-tagi doonta magaca isbahaysiga isaga oo shirar ku tagi doono isla markaana u isticmaali doono magacaas fursad uu uga qayb-galo doorashada la filaayo in ay dalka ka dhacdo sanadka 2021.
Wali lama oga in wadamamada ku xiray lacag bixintooda in lahelo mucaarad midaysan ay ku bixin doonaan lacag isbahaysiga looga dhawaaqay Muqdishu!.
Dhanka kala waxa jira xisbiyo garaayo afartameeyo (40) oo dhankooda ku dhawaaqay isbahaysiyo dhowr qaybood ka kooban? Sidee la isku waafijinayaa mucaaraadka kala qaybsan?
Previous articleDaawo Xildhibaan Geeseey Golaha ka hor-jeediyay Warbixin Ku Saabsan Daadad Saameeyay Magaalada Bardaale
Next articleDaawo Xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye iyo Suldaan Buube oo La Hadlay Jaaliyada Digil iyo Mirifle ee Magalada Toronto